Global Voices teny Malagasy » Ejypta : Fisamborana bilaogera taorian’ny vono olona tao Nag Hammadi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jona 2018 4:18 GMT 1	 · Mpanoratra Marwa Rakha Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Miranah
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Bilaogera Ejypsiana roa-polo mahery no nosamborina raha teo am-pidinana ny lamasinina tao an-tanànan'i NagHammadi  ao an-tampon'i Ejipta. Notarihin'ny Dr Mostafa Al Naggar , niala tao Cairo, Alexandria sy tanàna Ejipsiana hafa ireo bilagoera ireo mba hanome voninahitra ireo fianakaviana niharam-boina tamin'ny vono olona tao Naga Hammadi . Kopta (Kristianina any Ejypta) fito no maty voatifitra andro mialoha ny Noely tamin'ny 7 Janoary. Maro hafa no naratra rehefa nandao ny fiangonana taorian'ny vavaka Krismasy.
Tao amin'ny bilaoginy, Dr Mostafa Al Naggar  nanoratra hoe :
Ao aminay ny ozon'ny rafitra mampahory izay nanimba ny fiainanay sy ny firindranay. Nangalarina ny nofinay ary navela ho tsy an'asa, anaty tahotra sy ny tsy fananana izahay. Nanjary tany rava i Ejipta, izay toeram-pialofana azo antoka fahiny. Tsy milamina intsony izahay ao an-tokantranonay satria mety hitifitra anay mora foana eo ambony fandriana ireo mpitsidika vao mangira-dratsy manao fanamiana. Tsy azo antoka intsony ny ainay eny an-dalambe satria mety hisambotra anay sy hiherisetra amin'ny vehivavy ireo mpirenireny sy olon-dratsy. Nanatri-maso izahay ankehitriny fa mety hitifitra anay mora foana ireo mpamono olona rehefa avy mahavita fivavahana izahay.
Naato teo am-pidinana ny fiaran-dalamby ny fitsidihana tsy misy fikasana politika nataon'ireo bilaogera tany Nag Hamadi. Mitantara  i Kareem El Beheiry:
Kairo, 9:30 – nisambotra vondrona bilaogera sy mpikatroka avy amin'ny hetsika sy antoko politika samihafa ny polisin'i Nag Hammadi tamin'ny fahatongavan'izy ireo tany Nag Hammadi avy aty Kairo. Ny hampionona ny fianakavian'ireo niharam-boina no anton-dian'izy ireo fa tsy hanohitra fivavahana. Tamin'ny fisamborana azy ireo, nalain'ny polisy ny kara-panondron'izy ireo sy ny findain'izy ireo ary nentina tany amin'ny toerana tsy fantatra tao anaty fiara samihafa izy ireo.
Ireto ny lisitr'ireo bilagera nogadraina:
20- Frantsay mpikatroka iray mbola fantarina hoe iza
Zeinobia naneho hevitra toy izao :
Tous ou presque ces blogueurs comptent parmi les journalistes citoyens notoires.
Je ne comprends pas pourquoi ces blogueurs ont été arrêtés.
Anisan'ireo olon-tsotra mpanao gazety malaza ireo bilaogera rehetra na ny ankamaroany.
Tsy azoko ny antony nisamborana ireo bilaogera ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/24/121901/
 vono olona tao Naga Hammadi: https://fr.globalvoicesonline.org/2010/01/08/27040/
 toy izao: http://egyptianchronicles.blogspot.com/2010/01/egyptian-bloggers-detained-in-naj.html